IWoopra: Ixesha lokwenyani, uhlalutyo loMthengi olusebenzayo | Martech Zone
Woopra yi kubahlalutyi iqonga elijolise kumathemba akho nakubathengi, hayi ukujonga iphepha. Kuyinto ngentando kakhulu kubahlalutyi iqonga elijolise kunxibelelwano lwabathengi kunye nendawo yakho-ayisiyiyo kuphela indlela abayithathayo. Ukuqonda okunikiweyo kunokukuvumela ukuba usebenzise idatha yexesha-lokwenyani ukuqhuba amanyathelo exesha langempela.
Abanye be YeWoopra Iimpawu ezizodwa zeqonga:
Iiprofayili zabaThengi -Chonga abathengi bakho nge-imeyile kwaye ungeze amagama abo kwiiprofayili zabo. Dibanisa idatha yabathengi ngokuthe ngqo kwiiprofayili zikaWoopra ukuze uzenzele ishishini lakho. Bopha idatha efana nenqanaba leakhawunti yomsebenzisi, imbali yokuthenga, okanye enye idatha yenqanaba lomthengi. Itekhnoloji yeWoopra ilandelela abathengi abathengi kwizixhobo ezininzi. Kuba lixesha lokwenyani, unokubona ukuba ngubani okwindawo yakho ngoku.
IiNgxelo eziZenzekelayo nezeSiko -Iingxelo zenziwa ngokuzenzekelayo ngokusekwe kwidatha oyilandelayo. IWoopra izakuvelisa ngokuzenzekelayo ukuthengwa kwengeniso okanye iingxelo zabathengi eziqokelelwe ngeentsuku, iiveki, iinyanga, iindidi, ii-SKU, amacandelo, okanye iiprojekthi owongeza kuzo abathengi bakho.
Iifanele zokuguqula -Khomba indawo enkulu yokuhla kwinkqubo yakho yokuguqula kwaye uchonge kweliphi inqanaba abathengi bakho abashiya ngalo. Yazi ukuba abathengi bachitha ixesha elingakanani phakathi kwenjongo nganye, zichonge ezona ziqendu ziguquliweyo nezona zimbi kwaye uthelekise amaqondo okuguqula abathengi ngecandelo okanye ngeprojekthi.
Ukugcinwa kwabathengi -Thelekisa indlela ogcina kakuhle ngayo abathengi abathe baqala ukusebenzisa imveliso yakho ngexesha elinye (usuku, iveki, okanye inyanga). Oku kukuvumela ukuba ubone utshintsho kwimveliso okanye ekunikezelweni kwakho kubasebenzisi bakho.
Izinto ezibangela umsitho -Thumela i-imeyile, uhlaziye iprofayile yomthengi wakho okanye udibanise ezinye iintshukumo kunye neWoopra's Webhooks.
Zibonele ngokwakho ukuba kutheni iinkampani ezingaphezu kwe-3,000 zikhetha Woopra. Qala uvavanyo lweentsuku ezingama-30 zasimahla okanye ucwangcise idemo kunye nabo. Akukho makhadi etyala, akukho zibophelelo.
tags: Uhlalutyoukuguqulwaifanele yokuguqulaukulandela umkhondoUhlalutyo lomthengiukugcinwa kwabathengiulwahlulo lwabathengiukulandelwa komthengiingxelo yefaneliiingxelo zefaneliUhlalutyo lokugcina
Oktobha 1, 2013 ngo-7: 13 PM
Molo, enkosi ngeposi.
Ukuba bekufuneka uchaze abathathu abakhuphisana nabo kwiWoopra, bebeya kuba ngubani?
Mar 3, 2015 ngo 3:34 PM
Enkosi ngesishwankathelo. Ndicinga ukuba iWoopra, ene-analytics yayo yexesha, yeyona ndlela ifanelekileyo yokuHlaziya uGoogle. Ndidibanisa ne-analytics ebonelelwe yi-livechat, i-Visitlead, ke kulula ngakumbi ukufumana unxibelelwano. Elona candelo lililo kukuba akukho sidingo sokudibanisa, zonke izinto ezifanelekileyo zidluliselwa ngqo kwiWoopra. https://visitlead.com/plugins/analytics-woopra/